Madaxweynaha Somaliland Oo Hotelka Uu Degan Yahay Dubai Ku Qaabilay Saleeban Ciise (Xaglo-toosiye) Hoggaamiyaha Kooxda SSC | Somaliland.Org
Sidaasi waxa lagu sheegay war-saxaafadeed uu caawa magaalada Dubia ka soo saaray Afhayeenka madaxtooyada Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo ka mid ah weftiga madaxweynaha ee sugan dalka Imaaraadka carabta, waxaanu war-saxaafadeedkaasi u dhignaa sidan:-
“Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) Waxa uu maanta ku qaabiley Qasriga uu degan yahay ee MINA-SALAAMA HOTEL, Hogaamiyaha Kooxdii SSC, Saleebaan Ciise Axmed Kaar (Xaglatoosiye).
Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha SSC waxay ka wada hadleen sidii deegaanada Buuhoodle iyo qaybo ka mida Sool loogu soo dabaali-lahaa nabad-gelyo buuxda oo taam ah. Madaxweynaha iyo Gudoomiyuhu waxay istu-seen isla markaana kuwada Qanceen baahida ay shacbiga deegaanadaasi u qabaan in ay walaalahooda dalka ee kale la wadaagaan horumarka dhanwalba leh ee wax-barashada, Caafimaadka, Nabad-gelyada iyo Adeeg-yada kale ee ay noloshu u baahan tahay oo dhan, sida biyaha Iwm.
Saleebaan Ciise Axmed Kaar (Xaglatoosiye)na waxa uu balan qaaday inuu ka hawl-gelayo sidii khilaafka loo soo Af-jari lahaa, waxaanu sheegay inay reer soomaaliland yihiin dad wada dhashay oo aan sinaba u kala maarmaynin, Dantuna ay ku jirto wax-wada qabsiga iyo wada jirka.”
Previous Post‘Murashaxiintu Cirro iyo Gaboose uun ma aha Waana laga yaabaa in beeshu soo Jeediso..’Next Postinterview with the former Chief of State Protocol at the Ministry of Foreign Affairs	Blog